တစ်ဦးကလိုက်ဘေးရီးယားပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းကအခြေခံအားဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကိုင်ထားနှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်ထူထောင် non-နေထိုင်သူဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားများအခြေခံအုတ်မြစ်၏ 100% ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်အလှူရှင် (တည်ထောင်သူ) ကလှူဒါန်းခဲ့သည်နှင့်ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖြစ်လာရသည်။ အဆိုပါအလှူရှင်အကျိုးခံစားရသူများ designates နှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကို "Wish ၏ပေးစာ" အဖြစ်လူသိများနေတဲ့ပုဂ္ဂလိကစာရွက်စာတမ်းအတွက်စီမံခန့်ခွဲကြလိမ့်မည်ကိုမည်သို့အဆိုတင်သွင်း။
ပုဂ္ဂလိကမိသားစုရိုးအမြစ်နှင့် ပတ်သက်. ဥရောပဥပဒေများအပေါ်မှာအခြေခံသည်လိုက်ဘေးရီးယားပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းကတစ်ဦးထက်ပိုသော, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခေတ်မီပြီးစျေးနှုန်းသက်သာတဲ့ပုဂ္ဂလိကအိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းပလက်ဖောင်းများအတွက်ထူးခြားသော features တွေထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ လိုင်ဘေးရီးယားဥပဒကုန်သွယ်ခွင့်မရရှိကြသည့်သီးခြားဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများအဖြစ်ပုဂ္ဂလိကရိုးအမြစ်ကိုစဉ်းစား။ သို့သော်သူတို့သည်ထိုကဲ့သို့သောကော်ပိုရေးရှင်းရှယ်ယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကောင့်ဘဏ်အကောင့်များကိုကိုး စား. , အိမ်ခြံမြေနှင့်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအဖြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းက၎င်း၏ကျင်းပပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးပိုင်ဆိုင်သည်။
လိုက်ဘေးရီးယားပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်လိုက်ဘေးရီးယားအသင်းဥပဒေ (1977 မှတဆင့်ပြင်ဆင်အဖြစ် 2002,) ကအုပ်ချုပ်ကြသည်ကို "ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းကဥပဒေ" ဟုခေါ်။ ဤပညတ်တရားကို 1993 များ၏သြစတြီးယားပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းကဥပဒေအခြေခံသည်။ ဒါ့အပြင်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရဲ့မှတ်ပုံတင်မဲ့ကိုးစားလော့ဥပဒေနှင့်ယင်းမှတ်ပုံတင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဥပဒ 2002 အတွက်မွေးစားခဲ့သည်။
ပုံမှန်ဘုံဥပဒယုံကြည်မှုနှင့်မတူဘဲပုဂ္ဂလိက Foundation ၏အကျိုးခံစားခွင့်အတွက်အလှူရှင် (တည်ထောင်သူ) ၏သေသောနောက်, အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုအဆုံးသတ်နှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမရောင်းနိုင်။ တစ်ဦးကလိုက်ဘေးရီးယားပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းကန့်အသတ်အများပြည်သူ FILE လိုအပ်တယ်, ထိုအလှူရှင်၏အမည်များနှင့်အကျိုးခံစားရသူများတွေ့ရမှာပါဘယ်တော့မှမ။
• 100% နိုင်ငံခြားရေးပိုင်ဆိုင်မှု: အအလှူရှင်များနှင့်အကျိုးခံစားရသူများများအတွက်နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်နေထိုင်ရာတိုင်းပြည်နှင့် ပတ်သက်. အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ရှိပါတယ်။
•အဘယ်သူမျှမအခွန်ကောက်ခံမှု: က Non-နေထိုင်သူအကျိုးခံစားရသူများလိုင်ဘေးရီးယားအတွက် Foundation မှအခွန်အခမဲ့ထံမှငွေပေးချေမှုရရှိရန်။ သို့သော်အမေရိကန်အခွန်ထမ်းများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အခွန်ကောက်ခံမှုမှဘာသာရပ်အခြားသူများကိုသူတို့၏အခွန်အာဏာပိုင်များအားလုံးကိုဝင်ငွေကြေညာရပါမည်။
•အိမ်ရာစီမံကိန်း: အားလုံးပိုင်ဆိုင်မှုသူ / သူမသေဆုံးပေါ်မှာအလှူရှင်ရဲ့အမွေခံမှဖြန့်ဝေခြင်းသို့မဟုတ်အလှူရှင်ရဲ့ဆန္ဒကိုအညီအနာဂတ်အမွေခံ၏အကြိုးအတှကျဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါသည်။
•အင်္ဂလိပ်: အင်္ဂလိပ်အရာရှိက language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
လိုက်ဘေးရီးယားရိုးအမြစ်ကိုသီးခြားဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြပြီးကတည်းကသူတို့ကတခြားလိုင်ဘေးရီးယားဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူအလားတူမဟုတ်သောအရာနာမည်တစ်ခုရှိရမည်။ အဲဒီမှာအခြေခံအုတ်မြစ်၏အမည်ကိုအဆုံးတွင်သူဖြစ်ရမည်သောအရာကိုစကားလုံးများကိုသို့မဟုတ်အတိုကောက်အဖြစ်မျှလိုအပ်ချက်များကိုရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အများအပြားက၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုရှောင်ရှားဖို့စကားလုံး "ဖောင်ဒေးရှင်းက" ထည့်သွင်းရန်ရွေးချယ်ပါ။
အဆိုပါလိုင်ဘေးရီးယားကော်ပိုရိတ် Registry ကိုအားလုံးပုဂ္ဂလိကရိုးအမြစ်က register လုပ်သွား။ သူတို့ပုဂ္ဂလိကရှိနေဆဲဒါသို့သော်အဆိုပါ Foundation ၏စစ်ဆင်ရေးစာရွက်စာတမ်းများ Registry မှာတင်သွင်းကြသည်မဟုတ်။
ပဒေသာပင်များလည်းများ၏စာချွန်လွှာပိုင်ဆိုင်မှုဘယ်သို့ designated အကျိုးခံစားရသူများအဘို့ထိုသူတို့စီမံခန့်ခွဲခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ဖောင်ဒေးရှင်းသို့ပြောင်းရွှေ့နေကြသည်ရှိရာပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းကတည်စေ။ အဆိုပါစကားလုံး "ဘယ်သို့" ဟုအဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းပါရမီရှင်ပိုင်ဆိုင်မှု၏ပိုင်ဆိုင်မှုကြာတခါ, ထိုအလှူရှင်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုမပြောင်းနိုင်ဟုဆိုလိုသည်။ ပဒေသာပင်များလည်းလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအလှူရှင်အလှူတော်များအတွက်ငွေပေးချေသို့မဟုတ်လျော်ကြေးမဆိုအမျိုးအစားမခံမထားဘူး။ အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းပါရမီရှင်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်သီးခြားဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်လာသည်။
အဆိုပါစာချွန်လွှာဟာပဒေသာပင်များလည်းအဘို့ရည်ရွယ်ချက်သတ်မှတ်ပါတယ်နှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲခံရဖို့ရှိပါတယ်ဘယ်လောက်ပါဝင်နိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ဘဏ်လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူမည်သည့်စီးပွားဖြစ်လှုပ်ရှားမှုများဖယ်ထုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းစီးပွားဖြစ်သို့မဟုတ်ကုန်သွယ်လှုပ်ရှားမှုစဉ်းစားခြင်းမရှိပါ။ အဆိုပါပုဂ္ဂလိကအခြေခံအုတ်မြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်လိုအပ်သောယူဆလှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံပေမည်။ ရိုးအမြစ်ကိုတစ်ဦးကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီ (ကော်ပိုရေးရှင်း) အတွက်အရာရှိတစ်ဦးသို့မဟုတ်ညွှန်ကြားရေးမှူးကော်ပိုရေးရှင်းရှယ်ယာရှင်များဖြစ်လာပေမယ့်မရပါဘူး။
တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအလှူရှင်များကိုအခြားတိုင်းပြည်ကနေဖြစ်နိုင်သည့်၎င်းတို့၏နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်နေထိုင်ခွင့်အဖြစ်အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်နှင့်အတူခွင့်ပြုထားသည်။ တစ်ဦးကအလှူရှင်အတွင်းရေးမှူးသို့မဟုတ်ဖောင်ဒေးရှင်းများအတွက်အရာရှိတစ်ဦးမဖြစ်နိုင်ပါ။ တဦးတည်းအဖြစ်ခန့်အပ်လျှင်သို့သော်အလှူရှင်များက၎င်း၏ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးအလှူရှင်တစ်ဦးအကျိုးခံစားနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးလိုင်ဘေးရီးယားပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းများအတွက်အဓိက functions တပါရမီရှင်ပိုင်ဆိုင်မှုမှရရှိသောဝင်ငွေနှင့်အတူအကျိုးခံစားရသူများပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအလှူရှင်ဖောင်ဒေးရှင်းသီးခြားအကျိုးခံစားရသူများသတ်မှတ်နှင့်အတူစီမံကွပ်ကဲသည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ငွေပေးချေမှုသူတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်အခါနိုင်ပါတယ်မည်သို့မည်ပုံနှင့် ပတ်သက်. စာဖြင့်ရေးသားလမ်းညွှန်ချက်ပေးခွင့်ပြုထားသည်။
အဆိုပါအကျိုးခံစားရသူများအမည်များအစိုးရ၏ Registry ကိုနှင့်အတူမည်သည့်ဖိုင်ထဲတွင်ထည့်သွင်းမည်မဟုတ်ပါ။
Wish ၏ပေးစာအဆိုပါအလှူရှင်ကရေးသားများနှင့်ပုဂ္ဂလိကပြည်တွင်းရေးစာရွက်စာတမ်းဖြစ်နေဆဲနှင့်အစိုးရ Registry မှာတင်သွင်းခံရဖို့ဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအလှူရှင်ဖောင်ဒေးရှင်းစီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မည်နှင့်အကျိုးခံစားရသူများပြောင်းလဲပစ်ရန်ဆန္ဒရှိ၏ပေးစာပြင်ဆင်ရန်နိုငျပုံအတွက်လမ်းညွှန်မှုပါဝင်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအလှူရှင်ရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်နာနေကြစဉ်တွင်, Wish ၏ပေးစာဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်လှူဒါန်းခဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထိန်းချုပ်အားထုတ်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းမဟုတ်ပါဘူး။
ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ကနဦးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအနည်းဆုံး $ 10,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာ၏တန်ဖိုးရှိရမည်။ (ပဒေသာပင်များလည်းများ၏စာချွန်လွှာများတွင်ခန့်အပ်ထားသော) ကိုဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုကအရာရှိကနဦးပိုင်ဆိုင်မှုများတဲ့အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့်ကနဦးပိုင်ဆိုင်မှုများ၏တန်ဖိုး၏ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်၏အတည်ပြုချက်တစ်ဦးလက်မှတ်ထုတ်ဝေခဲ့သူမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူက file ရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှတစ်ဦး Will သို့မဟုတ်ပဒေသာပင်များလည်းတစ်စာချွန်လွှာ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှစ်ခုနည်းလမ်းများရှိပါသည်။ အောက်ပါပဒေသာပင်များလည်းများ၏စာချွန်လွှာများအတွက်သုံးခြေလှမ်းဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ပါသည်:
1 ။ ပဒေသာပင်များလည်းများ၏စာချွန်လွှာအဆိုပါမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူတင်သွင်းလျက်ရှိ၏
2 ။ တစ်ဦးကမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်အဖြစ်ခန့်အပ်လျက်ရှိ၏ နှင့်
3 ။ အဆိုပါမှတ်ပုံတင်အရာရှိတစ်ဦးလက်မှတ်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။
တစ်ဦး Will အားဖြင့်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ဖြစ်ရပ်မှာအိမ်ခြံမြေများ၏ Executor အရာရှိများခန့်အပ်ခြင်းနှင့်ဖောင်ဒေးရှင်းအက်ဥပဒေနှင့်ပဒေသာပင်များလည်းများ၏စာချွန်လွှာနှင့်အတူလိုက်နာမှုအတွက်အရာရှိများခန့်အပ်ဘယ်မှာဖောင်ဒေးရှင်းမှတ်ပုံတင်အားဖြင့်အလှူရှင်အဖြစ်ပြုမူပါလိမ့်မယ်။ အထက်တွင်ရှင်းပြခဲ့အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ကနဦးပိုင်ဆိုင်မှုများ၏တန်ဖိုး၏ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်၏အတည်ပြုချက်တစ်ဦးလက်မှတ်ထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
1 ။ Foundation မှအမည်ကား,
2 ။ ဖောင်ဒေးရှင်းမှရည်ရွယ်ချက်များ;
3 ။ အလှူရှင်ရဲ့အမည်နှင့်လိပ်စာ, တရားဝင် entity လျှင်ထိုအရပ်ကိုနှင့်မှတ်ပုံတင်ရေးအရေအတွက်;
4 ။ အဆိုပါမှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်များ၏အမည်နှင့်လိပ်စာနှင့်အတူ Foundation ၏လိုင်ဘေးရီးယားမှတ်ပုံတင်လိပ်စာ (LISCR Trust မှကုမ္ပဏီလိုအပ်);
5 ။ လုပ်ငန်းစဉ်၏ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဥပဒေဆိုင်ရာသတိပေးချက်များများအတွက်အလှူရှင်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာ;
6 ။ ကနဦးပိုင်ဆိုင်မှုဖော်ပြချက်;
7 ။ အကျိုးခံစားရသူများ၏သတ်မှတ်ရေး;
8 ။ ဖောင်ဒေးရှင်း၏ Duration:; နှင့်
9 ။ Foundation ၏အတွင်းရေးမှူးရဲ့အမည်နှင့်လိပ်စာ။
အဆိုပါအလှူရှင်ဟာ Registry နှင့်အတူတင်သွင်းဖောင်ဒေးရှင်းစာရွက်စာတမ်းများတင်သွင်းသောစီမံခန့်ခွဲမှုဆောင်းပါးများပြင်ဆင်သောနိမိတျလက်ခဏာ။ သို့သော် Registry ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုဆောင်းပါးများ file နှင့် Registry ကိုထုတ်ပေးစာရွက်စာတမ်းများ၏အတည်ပြုချက်၏လက်မှတ်တွဲဖောင်ဒေးရှင်းမှသူတို့ကိုပြန်လာမထားဘူး။
ရိုးအမြစ်ကိုအနည်းဆုံးနှစ်ခုကသဘာဝပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြသည်ရှိရာအနည်းဆုံးသုံးအရာရှိများရှိရမည်။ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအရာရှိများမဖြစ်နိုင်ပါ။ တစ်ခုမှာအရာရှိအတွင်းရေးမှူး (ကဥပဒေရေးရာ entity ခွင့်ပြုထားသည်) ဖြစ်လိမ့်မည်။ အရာရှိများ၏အမည်များဟာ Registry နှင့်အတူတင်သွင်းပါလိမ့်မည်။ အရာရှိအဘို့နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်နေထိုင်ခွင့်အပေါ်အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ရှိပါတယ်။ အရာရှိအလှူရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီဝင်ငွေနှင့်အရင်းအနှီးများဖြန့်ဖြူးဆုံးဖြတ်ရန်။
အဆိုပါအလှူရှင်တစ်ဦးကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ကပဲ့ထိန်းစေခြင်းငှါအရာပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းကစီမံခန့်ခွဲသူကနဦးအရာရှိများခန့်အပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအလှူရှင်အရာရှိကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းကကနေဝင်ငွေ၏ဖြန့်ဝေကိုညွှန်ကြားဖို့ပါဝါရှိပါတယ်။ အလှူရှင်များအများအားဖြင့်အမည်မဖော်ဖြစ်ကြသည်ပေမယ်ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့မှသူမ၏ / သူ့ကိုယ်သူခန့်အပ်ခြင်းအားဖြင့်ပုဂ္ဂလိက Foundation ၏အုပ်ချုပ်မှုကျော်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
တစ်ဦးကကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ကအနည်းဆုံးသုံးသဘာဝအပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်သည်ဟုခနျ့အပျနိုငျသညျ။ အဆိုပါအလှူရှင်က၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်တဦးတည်းဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါဘုတ်အဖွဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အတူကူညီပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဘုတ်အဖွဲ့ (ကယုံကြည်ကိုးစားပါကာကွယ်ပေးသူလိုမျိုး) ဖောင်ဒေးရှင်း၏ကာကွယ်ပေးသူအဖြစ်ပြုမူပါလိမ့်မယ်။ စာရင်းစစ်ဘုတ်အဖွဲ့မှခန့်အပ်ထားသောနိုင်ပါသည်။
နှစ်စဉ်ပြန်လာဖောင်ဒေးရှင်းအားဖြင့် Registry ကိုနှင့်အတူတင်သွင်းနှင့်အတွင်းရေးမှူးတို့ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါနှစ်ပတ်လည်ပြန်လာအချက်အလက်အားလုံးကိုယခင်က Registry ကိုနှင့်အတူတင်သွင်းခြင်းနှင့်သင့်လျော်သောစာရင်းကိုင်စံချိန်စံညွှန်းများအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြအတည်ပြုလိုက်သည်။ နှစ်ပတ်လည်ပြန်အများပြည်သူမှတ်တမ်းများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။
တစ်ဦးက Foundation ၏ဝင်ငွေရရှိမှုအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။ ဖောင်ဒေးရှင်းမှတ်ပုံတင်သည့်အခါပေးချေရမည့်အဘယ်သူမျှမဆုကြေးဇူးကိုအခွန်ရှိပါသည်။ သို့သော်အကျိုးခံစားရသူများစေငွေပေးချေမှုသူတို့ရဲ့အတည်တကျနေထိုင်ရာမြို့ရွာအခွန်အာဏာပိုင်များထံဘာသာရပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံသားများနှင့်ကမ္ဘာ့ဝင်ငွေအခွန်နိုင်ငံများတွင်နေထိုင်အခြားသူများကိုသူတို့၏အခွန်အခွင့်အာဏာအားလုံးကိုဝင်ငွေကြေညာရပါမည်။
ကနဦးအရင်းအနှီးငွေသားသို့မဟုတ်လှူဒါန်းခဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတန်ဖိုးအတွက်ထက်နည်း $ 10,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာမဖြစ်ရပါ။
လိုင်ဘေးရီးယား၌ရှိသောပုဂ္ဂလိကအခြေခံအုတ်မြစ်များနှင့်ဥပဒေရေးရာ entity ဒီမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်ရှိရမည်: LISCR Trust မှကုမ္ပဏီနှင့်၎င်းတို့၏ရုံးအခြေခံအုတ်မြစ်များအတွက်မှတ်ပုံတင်ရုံးရှိနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းမှအဘို့အလိုင်ဘေးရီးယား Registry ကိုတဦးတည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေ့ရက်ကာလ၌ပြီးစီးနိုင်ပါတယ်။
ကြောင့် Wish ၏ပေးစာ၏ထူးခြားမှုရန်, ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းရိုးအမြစ်အဖြစ်ဝယ်ယူမရရှိနိုင်ကြသည်။
တစ်ဦးကလိုက်ဘေးရီးယားပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းကအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှိပါတယ်: 100% နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု, ပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, privacy ကိုမျှအခွန်, အစဉ်အမြဲအသက်, အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း tool ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာလက်ခံမှုနှင့်အင်္ဂလိပ်တရားဝင်ဘာသာစကား